सुन्तलाको साथ पोष्ट कुखुरा | बेजिया
ग्रील्ड चिकन सुन्तला
भुनी कुखुरा ठूलो प्रस्ताव हो जब हामी जटिल गर्न चाहँदैनौं भान्छामा। केवल कुखुराको मौसम, यसलाई बेकि sheet पानामा केही तरकारीहरू र सागसहित राख्नुहोस् र यसको कामको लागि प्रतीक्षा गर्नुहोस्। खराब योजना जस्तो देखिदैन, हैन त?
Este ग्रील्ड चिकन सुन्तला यो उस्तै घटक पकाउनको लागि केवल अर्को तरिका हो। एउटा जसले तपाईलाई दैनिक जीवनबाट हटाउन सक्छ तर ठूलो जोखिम बिना। यद्यपि सुन्तलाको स्वाद बुझ्न योग्य छ, यो धेरै हल्का छ, त्यसैले, नयाँ चीजहरू चलाउन एकदमै हिचकिचाउने पनि यसको कदर गर्नेछ।
हामी यस पटक कुखुराको साथ आएका छौं प्याज, आलु र गाजर, तर तपाईं ईन्प्रिभियस गर्न सक्नुहुनेछ र ती सामग्रीहरू थप्न सक्नुहुन्छ जुन तपाईंलाई सबैभन्दा धेरै मनपर्दछ। तपाईंले खातामा लिनुपर्नेछ, कि यदि, प्रत्येकको खाना पकाउने समयहरू कहिले तिनीहरूलाई थप्ने भनेर जान्न। के तपाई यसलाई चलाउन हिम्मत गर्नुहुन्छ? यो सँगै सेवा गर्नुहोस् राम्रो सलाद.
1 सामग्री (दुई व्यक्तिको लागि)
सामग्री (दुई व्यक्तिको लागि)
२ आलु, पातलो काटियो
१ सानो प्याज, आठौं मा
लसुनको कवच, कुचुरियो
१ गाजर, काटियो
चुटकी जमिन काली मिर्च
रोजमेरीको १ स्प्रिग
Chicken कुखुराको फिला
१ सुन्तलाको रस
१/२ बियरको डिब्बा
भित्र राख्नुहोस् एक बेकिंग डिश आलु, प्याज र लसुन। पानीको थोत्रो तेल, मौसम, पानीमा रोमेरी थप्नुहोस् र राम्रोसँग मिक्स गर्नुहोस्। बेक गर्नुहोस् जब तपाईं फिलाहरू तयार पार्नुहुन्छ।
कुखुराको फिला र सफा गर्नुहोस् समावेश गर्नु अघि नुन र मरिच तरकारी संग ओभन डिश मा.
त्यसो भए एक कचौरा मा मिश्रण सुन्तलाको रस र बियर र परिणामस्वरूप मिश्रणको साथ कुखुरा र आलु खान्नुहोस्।
२ minutes मिनेट बेक गर्नुहोस् २००ºC मा र त्यसपछि यसलाई पल्टाउनुहोस्, प्यानको तल्लोमा सिर्जना गरिएको रसको साथ कुखुरालाई पानी दिने अवसर लिनुहोस्। अर्को २० मिनेट बेक गर्नुहोस् र तरलको साथ फेरि पानी।
यदि कुखुरा पर्याप्त पारिएको छ भने, ओभनको शीर्षमा ट्रे उठाउनुहोस्, ग्रिल खोल्नुहोस् र यसलाई पकाउन दिनुहोस्। छाला टोस्ट गरिएको छ। पहिले एक छेउमा र अर्कोपट्टि।
जब यो तपाईंको मनपर्दो हुन्छ, ओभरेबाट सुन्तला भुनी चिकन लिनुहोस् र यसलाई सलादको साथ सेवा गर्नुहोस्।
लेखको पूर्ण मार्ग: बेजिया » व्यंजनहरु » CARNES » ग्रील्ड चिकन सुन्तला
कैदमा परेको चिन्ताबाट कसरी जोगिने
सम्बन्धमा धैर्यताको महत्त्व